Ahoana ny fomba hanarahana ny vadinao / vadinao mamitaka amin'ny GPS | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Mamitaka anao ve ny vadinao? Tsapanao ve fa mila porofo ianao? Mila mametraka tracker hanaisotra ny fisalasalanao ve ianao? Eny, tsy ratsy mihitsy raha mahatsapa tsy fahatokisana ny vadinao ianao, raha afaka nanome anao antony iray na maromaro izy ireo hahatsapa fa mety ho voafitaka na mahita olon-kafa. Raha miahiahy ianao ny vadin'ny tsy mpino ary mila manamarina ny fisalasalanao ianao, ny fampiasana GPS tracker no tokony ho safidy farany. Misy andiany hevitra momba ny fitsipi-pitondran-tena izay marihina eo anilany sy ny loza ateraky ny tratra ary ireo olana mety hitranga.
Raha mihoatra noho ireo olana etika sy olana ara-dalàna izay mety hitranga, dia mbola afa-po amin'ny handeha ianao. Misafidy ny fitaovana GPS tsara indrindra ho anao; azonao atao ny mividy fitaovana geolocation, logger GPS, tracker telefaona na tapa-tsipika. Ny fitaovana fanaraha-maso izao dia misy endrika sy habe samihafa izay mety misy avy amin'ireo mpandray ny habe am-paosy, amin'ireo izay kely dia miraikitra amin'ny telefaona na wristwatch. Ny ankamaroan'ny GPS dia mitoetra ao anaty fiara manara-maso ny toerana misy azy sy ny toerana misy azy. Ny ankamaroan'ny rafitra fanaraha-maso GPS dia manome alalana avy amin'ny toerana lavitra, matetika no havaozina isaky ny segondra 2 ka hatramin'ny 5 segondra amin'ny finday / solosaina hitadiavana ireo vatan-kazo. Ho fanampin'ny fanaraha-maso tena misy, misy vata voatahiry hanondro ny tantaran'ny dia sy ireo toerana notsidihina indrindra. Fitaovana GPS fanaraha-maso matetika dia mora vidy sy mora ary tena mora apetraka sy ampiasaina. Mora be koa ny fikojakojana.
Betsaka olona mbola mino fa ilaina ny mampiasa mpanao fanadihadiana tsy miankina hanarahana vady mpamitaka, ity ny 21st taonjato sy teknolojia dia be dia be. Tsy mila manakarama mpanao famotorana mitentina dolara an'arivony fotsiny ianao mba hanatanterahana asa toa izao, maka fahazoana tracker iray mampiasa satelita miaramila hahitana toerana. Amin'izany fomba izany dia mitahiry vola ianao ary mifehy tanteraka ny fanadihadiana.
Ny karazana GPS dia:
Ny mpandrafitra GPS
Logger rafitra toerana (GPS)
Karazan-java-miavaka GPS ny logger GPS, indrindra ny logiciel amin'ny lasibatra sy ny fivarotana ao amin'ny toerana fitehirizana manokana. Avy eto no azo jerena ary ny fampahalalana toy ny firaketana an-toerana, ny fitsidihana ny fotoana, ny hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha ary ny farany dia nandany fotoana tamin'ity toerana ity. Raha karazana iray tianao ny hahafantatra hoe aiza ny mpiara-miasa no mandany ny ankamaroan'ny androny, dia azo antoka fa tsy maintsy ilaina io fitaovana io. Fitaovana tena ilaina ihany koa io hanaporofoana fa tsy mivadika amin'ny toerana misy azy ny vadinao rehefa anontaniana. Rehefa miahiahy ny tsy mpivadika ianao, dia any amin'ny toerana iray manokana toy ny trano fisakafoanana na trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, fisakafoanana na angamba ao an-tranon'ny olon-kafa. Azo antoka fa ho hitanao fa hatrizay hiseho amin'ny toerana fitehirizan'ilay mpanara-maso ny toerany. Ny fitaovana dia mazàna dia kely dia bitika kely ary mbola miasa tsara ny asany.
Azonao atao ny mametraka ny Tracker ao anaty na amin'ny fiaran'ny vadinao, izany dia miankina amin'ny karazana trackers. Rehefa vonona ny hisintona ny fampahalalana momba ny log ianao dia azonao atao ny manala azy amin'ny fiara mampifandray azy amin'ny seranan-tsambo USB PCs anao ary misintona ny fampahalalana. Raha vantany vao vita io dia azonao atao ny mijery ireo hazo na zanabolana na fijerena sarintany izay misy ifandraisany kokoa, mety amin'ny endrika endrika an-tsoratra mihitsy aza. Raha vantany vao azo io fampahalalana io dia azonao atao ny mandoro azy amin'ny kapila na kapila ary azonao atao ny manolotra ny mombamomba azy tara.
Ny tena moto GPS dia tena mahaliana azy rehetra, miaraka amin'ity teknolojia manokana ity. Azonao atao ny manara-dia, eny an-dalana, lafo vidy kokoa ary mila fikojakojana sy fahaiza-manao be dia be ny fanaovana ilay asa. Mampiasa rindrambaiko miorina amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny teknolojia GPS izany, miaraka amin'izay ianao havaozina miorina amin'ny hetsika rehetra mitohy misy fidirana amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny telefaona finday na solosaina. Ny tena toerana dia ahafahanao mahita ny kendrena amin'izay misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Ohatra, rehefa mandeha ny mpandeha ary efa manara-maso ianao izao dia afaka miantso ny vadinao hanamarina ny toerana misy azy ianao. Ity dia azo ampiasaina mba hamafana ny fisalasalanao, mety handainga izy ireo; izany dia hanamarina bebe kokoa ny ahiahinao na mety hanao ny marina izy ireo ary hanamafy ny toerana misy azy ireo, matetika dia mampihena ny ahiahy sy mampitombo ny fahatokisana. Satria mety ho fanamafisana fa miahiahy ianao amin'ny tsy antony, tsy mandany fotoana miaraka amin'ny lehilahy hafa ny vadinao araka ny noheverinao.
Azonao atao ny miditra amin'ny logn'ny filazan'ny vadinao anao fa tara izy ireo anio alina, izany dia ahafahanao mahafantatra ny toerana mety ho mety ho any am-piasana araka ny nolazain'izy ireo na any amin'ny toerana hafa. Tena mety hanampy anao izany rehefa tianao ny hisambotra azy ireo mena na amin'ny hetsika.
Ho an'ny GPS tena misy amin'izao fotoana maoderina izao dia mila fantatrao ny zava-misy fa matetika izy ireo dia misy vidim-pitaterana isam-bolana. Ny sasany koa mihena ny sarany fikojakojana sasany, ity sarany ankapobeny ity dia mety ho $ 20 ka $ 70 isam-bolana. Ny vondrona sasany dia afaka mandefa anao ny làlan'ny toerana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra saingy amin'ny andro maoderina izao, tsy ilaina izany satria ny ankamaroan'ny finday dia afaka miditra mivantana ilay sari-tany ary manome anao ny fampahalalana ilaina.
Ireo tetikady tetikady mametraka GPS trackers amin'ny fiara iray
Zava-dehibe ny mametraka vondrona GPS ao amin'ny faritra iray izay hahafahany mifandray amin'ny zanabolana, ny fametrahana sahaza dia tena zava-dehibe ary manan-danja. Ity ambany ity ny lisitry ny faritra azon'ireo mpanaramaso mpanara-maso anaty fiara iray:
Ao anaty bigne plastika
Ny elanelana eo anelanelan'ny varavarankely sy ny satroka
Eo ambanin'ny dash / jiro marefo fahatelo
Ao ambadiky ny batrika plastika aoriana
Ao anaty boaty fonon-tànana
Eo ambany seza na seza aloha
7036 Total Views 19 Views Today